TOMATO ABAKANSKY CASAAN: SHARAX, SAWIR, DABEECAD, BEERASHADA - NOOCYO YAANYO
Asal ahaan ka soo jeeda Altai: yaanyo kala duwan oo casaan ah Abakansky
Yaanyada - mid ka mid ah dalagyada beerta ugu caansan, iyo soo bixitaanka noocyo cusub, sida ku cad dib u eegista, isla markiiba soo jiidata dareenka beeralayda iyo beeralayda dacha. Qodobkan waxaan ku baranaynaa yaanyo "Abakansky pink"sharaxaadda noocyada kala duwan iyo astaamaha, sawirrada, awoodda ay ku koraan gobollo kala duwan.
"Abakan Pink" waxaa lagu sameeyey gudaha Altai Territory, oo loogu talagalay in lagu noolaado gobollada leh jawi qabow, waayo sifooyinka dhadhanka ah waxaa si xaq ah loo tixgelinayaa inay tahay luuliyo doorashada Siberia. Dooni ku salaysan kala duwan ee shirkadda "beerta Siberian" shirkadda "Lance."
Sidoo kale "Bisilka Abakansky" waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo yaanyo ah sida: "Siberian hore", "Verlioka", "Black Prince", "Evpator", "Maryina Roshcha", "Star of Siberia", "Verlioka Plus", "Pink Paradise" "," Openwork "," Spasskaya Tower "," Tretyakovsky "iyo" Katya ".
Kala duwan ayaa leh geedo badan oo isku dhejis ah oo dhowr ah oo afkoda ah oo u baahan taageero: dhererka afuufta ayaa gaadha laba mitir. Gubashadu waxay u koreysaa, si toos ah u kor, u oggolow caleemaha dhinaca, oo laga saari karo qanjirada. Celcelis ahaan, samee ilaa lix burush oo leh miraha ku jira qaddarka shan ama toddoba qaybood.
Miro ayaa la mid ah qaabka "Bull's Heart" kala duwan, weyn, celcelis ahaan laga bilaabo 200 ilaa 500 garaam, waxay gaari karaan 800 garaam, riixidda daciifka ah ayaa la muujiyaa. Mararka qaarkood hal baadiyaha ah, labaduba waxay ku wareegsan yihiin iyo midho wadnaha ah oo wada jir ah. Miraha bislaaday waa midab casaan leh, oo leh in ka badan lix dabe, jidhku waa sonkor, cufan iyo fareemo. Tirada miraha waa yar tahay.
Kala duwanaanta Altai waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid dhex-dhexaad ah: Bisaylku wuxuu bilaabmaa 110-120 maalmood kaddib marka la beerto, xilliga xagaaga oo dhan ayaa sii socota. Yaanyo "Abakansky pink" waxay miraha miraha si siman u si fiican u sameeyaan aqalka dhirta lagu koriyo iyo xaaladaha dhulka ee furan, waxaa lagu kala saaraa dhalid wanaagsan: ilaa shan kiilogaraam oo dalag ah ayaa laga goostaa mitir laba jibbaaran. Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, dhererka baadiyaha ayaa aad uga sareeya markii la koray dhulka furan. Marka ay bislaadaan, midhaha miraha laguma burburin karo si fiicanna loo qaado. Guud ahaan, waxaa loo tixgeliyaa nooca salad ah ee yaanyada, laakiin dhadhanka dhadhanka iyo dhadhanka fudud, qadar badan oo sonkor ah ee halbeegga ayaa suurtagal ah in la isticmaalo soo saarista suugada, casiirka, noocyada kala duwan ee kaydka, iyo xataa macaanka.
Ma taqaanaa? Maaha wax laga yaabo in yaanyo loo tixgeliyo mid ka mid ah midhaha ugu caansan adduunka: hal galaas oo casiir ah ayaa buuxiya baahida nololeed ee nololeed ee fitamiin C, iyo joogitaanka serotonin, hormoonka farxada, ayaa awood u leh inuu kiciyo niyadda.
Ka mid ah faa'iidooyinka aan shaki ku jirin waa sifooyinka soo socda:
dhaqanku wuxuu u adkeysanayaa cayayaanka iyo cudurada;
wuxuu leeyahay mudo dheer oo ah fruiting kaas oo kuu ogolaanaya inaad soo gasho xagaaga oo dhan;
miraha waa weyn, oo dhadhan sarreeya, iyada oo aan lahayn derbi abuur;
dhalidda sarreysa iyo culeyska miraha;
Si wanaagsan loo qaado iyo la dhigo, waxay leeyihiin bandhig fiican.
Sida laga soo xigtay kuwa ku beeray noocyo kala duwan, waxay ku dhaqmeen wax khasaare ah. Si noocyo laga yareeyo yaanyo "Abakansky pink" waxaa ka mid ah baahida loo qabo garter iyo pasynkovaniyu.
Iska hubi noocyada noocan oo kale ah yaanyada sida "Gacaliga Eagle", "Madaxweynaha", "Klusha", "Japanese Primavera", "Rio Grande", "Rapunzel", "Samara", "Pink Aabe", " Gawaarida "iyo" Liana ".
Beeridda yaanyada geedo ee muuqaalka cimilada ee gobolka waxaa la qabtaa dhammaadka February ilaa dhamaadka March. Seeds waxaa lagu daaweeyaa xal manganese ah oo lagu qooyay laba iyo toban saacadood kiciyaha kobaca.
Ku rid sanduuqyo razassny, daboolay filim iyo ku riday meel diiran. Sida isku dar ah dhulka ayaa loo adeegsaday ciidda loogu talagalay dhirta qudaarta. Inkastoo seedling sii kordhaya, waa joogto ah, laakiin si dhexdhexaad ah u waraabiyey, ka saareen sprouts daciif.
Qalabaynta dhulalka furan ayaa la qaadaa marka dhulku diiriyo (May), waayo taxaddar, geedo ayaa lagu daboolay filim haddii ay dhacdo in uu soo baxo dhaxan.
Waa muhiim! Waa suurtogal in la beero tamaandhada ka dib dalagyada solanaceous, qajaarka, digirta, basasha iyo kaabashku noqon doonaa kuwa ugu horreeya ee ugu horreeya.
Marka beerto, waa in la ogaadaa in duurka u koraan: saddex duurka waa ku filan halkii mitir labajibbaaran. Marka sii kordhaya ee lagu koriyo ah, ogow in heerkulka waa inuusan ka badan 30 ° C, geedo u baahan yihiin hawo joogto ah.
Tan iyo noocyada kala duwan ee u janjeedheen branching, waxaad u baahan tahay inaad raacdo caleemaha dhinaca: waqti si ay u soo saaraan, abuuraya baadiyaha ee laba afkoda. Dalabka ayaa u baahan in la diyaariyo horay, afkoda noocyada kala duwan waa dhuuban waxayna jebin kartaa miisaanka ugxan ama duufaanka dabaysha.
Waraabinta waxaa loo baahan yahay si joogto ah, iska ilaali buuxinta dheellitirka iyo dheecaanka nitrogen inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, haddii kale duurka ayaa bilaabi doona in ay koraan oo halkii ay ugxan-yari ka dhigi lahaayeen tiro badan. Wixii waraabin ah ee biyaha isticmaalaya heerkulka qolka, waa qasab in ay kala tagaan ama roob. Sida caadiga ah ee waraabka - hal mar ama laba jeer toddobaadkii, ciidda geedka waa in la qoyan yahay, laakiin aan ka badan. Duurka dhalinyarada waxay u baahan yihiin saddex litir oo hoos yimaada baadiyaha, dadka waaweyn iyo sare - ilaa 10 litir. Biyaha kaliya ee ka hooseeya xididka subaxa hore.
Isla mar ahaantaana waraabka, fur furka ciidda si ay u siiyaan xididada oksijiinta iyo ka saar haramaha.
Feeding waxaa loo isticmaali karaa labadaba organic iyo macdanta. Marka ugu horeysa quudinta yaanyo ka dib markii laga beerto meel joogto ah. Wadarta xilliga aad ku joogi kartid afarta dhaymo. Haddii aad isticmaasho maaddo dabiiciga ah (shimbir shimbir, faleebo caws ama mullein), biyo ka yar baadiyaha, waxaad dabooli kartaa dusha sare leh mulch.
Haddii aad ogtahay in ugxan-yaryar ee dalagga mustaqbalka dhici doono - tamaandhada ka maqan Bacriminta adag oo leh qaybaha raadka sida boron iyo magnesium.
Waa muhiim! Marka aad dooranayso Bacriminta potash, waxaa fiican in la siiyo doorbid si ay potassium sulphate, doorashada ee chloride potassium waxay yeelan doontaa saameyn niyadjab on dhirta.
Yaanyo "Abakanski pink" waxay ka duwan tahay difaaca adag ee cudurada iyo cayayaanka - haddii aad raacdo xeerarka dalagga dalagga, ka dibna uma baahnid inaad ka walwasho.
Inta lagu jiro xilliga daaqsinka, Beeraha Colorado waxay ku beeran karaan geedo. Si loola dagaallamo, waxaad isticmaali kartaa hababka 'awoowga' deegaanka:
Ka dib markii laga beerto geedo, ku saydhaa safaf cusub oo dhadday u dhexeeya saf - waxaa la ogaadaa in duqsiyo ay dhaafaan meelahaas.
Waxaad daadi kartaa qoryo alwaax ah, waxaa fiican in subaxdii, marka weli weli qoyan ka dib dheeh.
Caawin wanaagsan oo ka soo horjeeda cayayaanka qoyaanka gabbaldayaha, maqaarka cawska iyo walnut.
Bilowga horumarinta, geedo ayaa lagu daaweyn karaa wixii cayayaanka ah, taas oo sidoo kale ka hortagi doona cayayaanka.
Ma taqaanaa? Guud ahaan, waxaa jira ilaa 10 kun oo nooc ah iyo noocyo yaanyo ah oo adduunka ah, ugu yar oo aan ka badnayn laba sintimitir dhexdhexaad ah, miisaankana waa kan ugu badnaan hal iyo badh kilogram.
Tamaandhada ma aha mid caan ah oo keliya - maanta may jirin kijada aduunka adoo aan ka helin khudaartaan, iyo noocyada suxuunta ayaa adag in la qiyaaso. Lagu kobcayo sariirta, shakhsi ahaan ayaa la ururiyey miraha dhalaalaya oo casiir leh oo qurxin doona miiskaaga xagaaga iyo xilliga jiilaalka.